Alatsinainy 06 Septambra 2021 – FJKM
Alatsinainy 06 Septambra 2021
Nahatonga ady hevitra teo amin’ny mpino ny amin’ireo Jentilisa izay manolo-tena ho an’ny Tompo . Ao ny milaza fa tsy maintsy forana aloha ireo vao azo ekena ny fanolorantenany . Nitondra fanazavana àry i Paoly fa :
Ny fanamarinan’ Andriamanitra ny mpanompony dia :
1-Tsy miankina amin’ny fiaviana sy ny fombafomba
« Koa izany fahasambarana izany , moa an’ny voafora ihany va, sa an’ny tsy voafora koa ? » Fanontaniana no apetrak’i Paoly eto ary izay ihany no mitondra valiny tandrify izany . Ambaran’i Paoly fa manana zo hisitraka ny fahasambaran’ny olona nohamarin’ny Tompo ihany koa na ireo izay atao hoe : Jentilisa , hafa firenena izay tsy Jiosy . Raha natokana ho an’ny Jiosy ihany tokoa mantsy ny famonjena , na dia isika aza sahirana amin’izany . Soa ihany fa ho an’izao tontolo izao ny famonjen’ny Tompo, dia izay mino Azy izany . Tsy fiaviana na fombafombam-pivavahana no hanamarinana antsika .
2-Miankina amin’ny dian’ny finoan’i Abrahama
« Fa izay mandeha araka ny dian’ny finoan’i Abrahama razantsika koa , izay nananany fony izy tsy mbola voafora » (and12). Ambaran’i Paoly fa raha nandray ny teny fikasana avy amin’ny Tompo Abrahama dia fony izy mbola tsy voafora . Ny finoan’i Abrahama no nampisongadina azy ka nanekeny ny baikon’ny Tompo , satria izay marina amin’ny finoana no ho velona .
Ahoana no ahafahana milaza fa tsy miankina amin’ny fiaviana na ny fanarahana fombafombam-pivavahana ny famonjena ?